abantu banamuhla baye eside abasijwayele bahlala endaweni eyodwa ngaphandle komuzi, kanye nezinye ukuya emsebenzini, kodwa izakhamuzi Magnitogorsk ukunyakaza okunjalo kwenza anezici yabo. Phela, zonke izinsuku baye emsebenzini e-Asia, futhi ekhaya kusihlwa ukubuya eYurophu. Njengabangaqondakali njengoba kungase kubonakale, kodwa empeleni kunjalo. Futhi ngenxa yokuthi lo muzi ikhona kokubili loMfula Ural, imboni ngokuyinhloko kanzulu ngakwesokunxele (Asian) ogwini. Kuyaphawuleka ukuthi Magnitogorsk ingenye 12 kwemizi kanyekanye elise izingxenye ezimbili zezwe. Izakhamuzi behlala ndawonye bengashadile akusashiwo kusimangaze ukuhamba kwayo njalo kusukela kwelinye izwekazi beya kwelinye ngu amabhuloho, kodwa izivakashi edolobheni awukwazi ukufihla ukumangala kwakhe.
Kungakhathaliseki noma cha abantu zizwile idolobha ezifana Magnitogorsk, okuyinto ndawo - bambalwa kakhulu abantu ungathini. Phela ukunakwa ngokuvamile igxila kwezinye zezici zalo muzi, abaningi lapha. Abaningi baze bacabange ukuthi kukhona indawo Magnitogorsk, kodwa akuyona.
Eqinisweni, idolobha kungokwalabo Chelyabinsk esifundeni futhi itholakala eningizimu-esentshonalanga, yilapho ngasemngceleni Bashkiria. 370 amakhilomitha square - nje endaweni enjalo kunesithembiso Magnitogorsk. Yini endaweni - lokhu kakade, thina kuphela ukwengeza ukuthi umuzi zokuphatha sehlukaniswe 3 izifunda - Right Bank, uLenin futhi Ordzhonikidze.
Ngo Magnitogorsk (kuvame ukubizwa ngokuthi i-bendawo edolobheni) isimo sezulu yezwekazi owandile. Umuzi libhekene eside Ubusika cool nezinyanga zasehlobo uma kuqhathaniswa efudumele. Ngo-January, nezinga lokushisa lapha -15 ° C, futhi ngo-July - 19 ° C. imvula yonyaka - 377 mm.
kwezimo ezingezinhle kwemvelo - netinkinga letijulile ezibhekene Magnitogorsk yesimanje. Yini ndawo - namuhla akuyona efanele kakhulu ngenxa yokuthi abantu abafuni ukuya khona ngenxa amazinga aphezulu kakhulu yokungcola. Ososayensi American osebenza ngensimbi Institute bathi le edolobheni phakathi kwemizi imvelo abampofu kakhulu. Esimweni emakamu anjalo we-formaldehyde itholiwe, okuyinto izikhathi 4 esiphezulu izinga ovumelekile. Kunezindlela eziningi air kanye nezinye izinto eziyingozi.
Steel Works isizathu esiyinhloko isimo okungekuhle emvelweni, esibonakala Magnitogorsk. Chelyabinsk esifundeni akanayo emzini owodwa langcolile kute kunalokhu. Ngokuvamile ungabona kwi Magnitogorsk cap uthuli grey ansundu-njengegazi futhi uzizwa iphunga acrid hydrogen sulfide. Kodwa naphezu kwale mizamo yokusilela, muzi ezindaweni eziningi ezithakazelisayo kuwufanele ngokuvakashela, futhi izinto ukuthi bayakufanelekela ezibonayo.
Usuku isisekelo somuzi 1743. It wayedabuka emzaneni ezinezivikelo eziqinile, esisogwini lomfula Yaik. Kusukela ngomhla ka-1759, lo muzi lalinabashumayeli 110 amakhaya yokuhlala nezakhamuzi 300. Ngalowo nyaka waqala ukuthuthukisa yensimbi nsimbi. Lesi sitshalo kuqala ukuze kusebenziswe ore ngokuthi Beloretsk lakhiwa 1874. Ngaleso sikhathi, kuba baqashwe ayizinkulungwane 2.5. Man. nemizana Magnetic, Navarino, Chernigov, Yangelsky, Trebiatsky futhi isiphetho Verhnekizilsky, Bobrykinsky, Bold 1881 kulekelelwa Magnitogorsk. Yini izwe noma isifunda kwaba kuleyo minyaka, cishe akekho olele akakhumbuli, kodwa kuyaziwa ukuthi ngemva ukubusa kulezi ezindaweni labantu liye landa abantu 10 000.
Ukuqalisa uxhumano nge Beloretsk ngo-1915 lo jantshi sabekwa Magnitogorsk. 1929 kwabe kungunyaka sokwakha isitshalo Metallurgical emzini, okwaba Magnitogorsk isikhungo Metallurgical kuleli zwe. Kusukela ngo-1932 edolobheni uvele isikole sokuqala, ekolishi nguthishela, yemidlalo, wesikhumulo sezindiza, a tram imigqa embalwa, efemini usimende kanye isikole umculo. Ngo-1940, inani labantu umuzi wawuyigolide abakhileyo 147.000. 50s babe inkathi ethile ekwandeni Magnitogorsk - has kakhulu anda endaweni yayo, lakhiwa amakhaya amaningi amasha.
Kanjani ukuze uthole Magnitogorsk
Edolobheni ayinakho sezindiza, it is akhiwe kude, kodwa kwaba lapha fly bendawo nezivakashi abafisa uvakashele Magnitogorsk. Kukuziphi izici lo muzi, lokho akusho ukuthi wazi, kodwa into yokuhamba, ngawo ungathola lapha, futhi esimisweni ukuhamba kwayo kubalulekile ukufunda kusengaphambili. Lapho sezindiza wendawo okungokukaNkulunkulu Republic of Bashkortostan, elise km 14 nje kusukela Magnitogorsk. Thola esikhumulweni sezindiza edolobheni kungaba omunye amabhasi, futhi ufika ngendiza esuka Orenburg, eMoscow, Antalya, amaminerali Lamanzi.
Ungakwazi ukuza Magnitogorsk, futhi isitimela, kodwa endleleni esuka eMoscow kuyodingeka ichithe ama-iri ama-36. Ngokuqondene zokuxhumana ujantshi kanye nemizi ezifana Sibai, Ufa, Kartaly Beloretsk nabanye, kubuye kube kakhulu.
Namuhla Magnitogorsk ensimini cishe kwesokunxele ngaphandle izinqolobane, Mount Magnet Nokho, cha, umkhakha unendima ebalulekile umnotho wedolobha. inhlokodolobha Metallurgical yezwe - ukuthi uvame ukubizwa Magnitogorsk. Yikuphi ndawo kwekulu Metallurgical sihlanganise, eyaziwa hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi emazweni amaningi CIS.
Connections somuzi ezingeni eliphezulu kakhulu - 17 ngebhasi, 35 tram imizila, kanye amatekisi eziningi. Magnitogorsk Daily ziqasha angaphezu kuka-130-tram izitimela, amabhasi mayelana 100 900 "minibuses". Lo muzi ubizwa evuthiwe ibhizinisi sphere - iqashe u-20% wesibalo sabantu. Bangaphezu kuka-izitolo 800 namuhla has insimu yayo, Magnitogorsk. Yini ndawo - abantu musa noma ucabange, ngoba akudingeki ukuya enkabeni yesifunda, ngoba lapha banayo yonke into oyidingayo.
Magnitogorsk futhi ngokuphepha ubizwe isikhungo zemfundo nesayensi. Ngenxa ensimini kwakhona 3 esikoleni esiphakeme (amanyuvesi lobuchwepheshe kanye zakudala somculo), 54 izikole zamabanga, okuhlanganisa zokuzivocavoca, lyceums nezikole nge e-sifunde sijule ezihlokweni ezithile ezithile.
Jazz Mall - enye yezindawo ezinkulu kakhulu eziyinxanxathela, okuyinto zitholakala Magnitogorsk. Yini ndawo - awukwazi ukwazi, kodwa angayinaki le "mall" abathengi nje abakwazi. Phela, lapha manene bantu abangenalo ukwethula okukhiphayo zabo ezithokomele emzini ngaphandle yezitolo, kukhona konke okudingayo: izitolo eziningi nge izingubo, izicathulo, izimonyo, isikhumba izimpahla, ubucwebe, Imishini kanye nezinye izinto eziningi, kanye cafe lapho nawe ungadla babe nezikhwepha yezitolo olwengeziwe.
Ethandwa kakhulu phakathi yezitolo abathanda ukujabulela "Central City Fair", esisogwini ul. Gryaznov, SEC "Gostiny Dvor" futhi "Cascade" yithemba noKarla Marksa, "Fireside" ku Lenin str. Futhi "Troika" emgwaqeni. Soviet.
Izikhangibavakashi Magnitogorsk libanakekele iminyuziyamu ekhethekile, futhi elalidume kunawo wonke phakathi kwabo kukhona ezifana efulethini Borisa Ruchova, kwebuciko, National History Museum kanye Museum zensimu zalesi sihlahla Metallurgical.
Abathanda yaseshashalazini kuwufanele ngokuvakashela wendawo Drama Theatre. A. S. Pushkina, uMbuso Opera kanye Ballet Theatre, futhi Puppet Theatre "Harlequin", okuyinto ebaluleke ikakhulukazi imindeni enezingane.
avenue Ensemble of Metallurgists, kanye Ensemble esikhumbuzo ukuze Lenin Square kukhona zodumo bokwakha, esesikhundleni insimu yayo emzini Magnitogorsk. Kukuziphi izici kukhona la ezikhangayo, cishe uyazi zonke wesikole. Ukunakwa kufanele ikhokhwe futhi endlini yokuqala enkulu, elakhiwa ngo-1930, kwamiswa itshe lesikhumbuzo esitimela, okuyinto efika okokuqala Magnitogorsk, ibandla le-Ascension, Lesiphethu Ukucula, Mihaila Arhangela ethempelini, mosque Muslim, nezinye izinto eziningi.
Naphezu kweqiniso lokuthi Magnitogorsk nje maphakathi umkhakha steel ngaphandle nomlando omude, ayinayo ukuba nesithukuthezi noma bendawo noma izivakashi ngokuvakashela. I yokuchitha isizungu komkhuba kakhulu angase uya ebhayisikobho ( "Contemporary", "Umlingane Osebenzelana Naye" "Kronverk Cinema" nokunye.), Clubs ( "Pyramid", "Full Moon", njll) nokuzijabulisa izikhungo ( "emzaneni Cossack", "Boomerang", " Universal "), lapho kukhona impela eningi. Futhi ungaya bajwayelane ezitaladini abaningi, amapaki kanye izakhiwo komuzi.
Imindeni nezingane kufanele uvakashele amanzi epaki lendawo "Impophoma Wonderland" isekisi ezisemadolobheni noma omunye izikhungo eziningi ezemidlalo. A ukhathele kakhulu, ungaya komunye zokudlela wendawo noma amathilomu, futhi ejabulela ukudla okumnandi, xoxa nabangani noma amalungu omndeni zazichitha usuku kahle. Izikhungo kunazo owaziwa sonkana Magnitogorsk kukhona ezifana yokudlela "Necker Regis" Pizzeria Sergey sika, Cafe "Avenue", yokudlela "Deja Vu" kanye nabanye abaningi.
Futhi-ke, kubalulekile ukuba singakhohlwa ukudabula ibhuloho emaphakathi yokuxhuma eYurophu nase-Asia, kanye ukuthathwa isithombe eduze omaka, okuyinto efakwe both qeda of kwebhuloho.
Sezindela Toplovsky eCrimea
Ski resort "Snow": izithombe kanye nokubuyekeza
Sudan Flag buka, ukubaluleka komlando
I-Electrocardboard Nalokho Abadlayo
Umdlwane Spaniel - yinhlama stastya encane